Trump Iyo Biden Oo Gorgorada Iskula Galay Dooda Tvga
Tuesday October 20, 2020 - 08:58:57 in News by Hadhwanaag News
"Hab-dhaqanka guddigan u janjeera Biden ayaa doodda oo dhan ka dhigay mid fashil ah"
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump iyo ninka kula loomamaya Aqalka Cad, Joe Biden, ayaa aad ugu murmay qorshayaasha dooddooda ugu dambaysa ee taleefishinka laga sii dayn doono.
Kooxda u ololaynaysa musharaxa xisbiga Jamhuuriga ayaa dadka doodda soo qabanqaabiyay waxa ay ku eedeeyeen in doodda todobaadkan ay gacan ku siiyeen Dimuqraadiyiinta in mowduuc ahaan meesha loogaga saaro mowduuca siyaasadda arrimaha dibadda.
Dhinaca kooxda u ololaynaysa Biden ayaa waxa ay Mr Trump ku eedeeyeen inuu isku dayayo inuu ka weecdo jawaabaha su'aalaha laga waydiiyay cudurka safmarka ah ee Covid-19.
Mr Biden ayaa si wayn ugu horreeya aaraa'da la uruuriyay iyadoo laba todobaad uun ay doorashada ka harsan tahay.
Hasayeeshee waxyar ayuu ku horreeyaa dhowr gobol oo muhiim ah oo dalkaas ku yaal kuwaas oo ah meesha ugu dambayntii lagu kala baxo.
Maxay sheegeen kooxda u ololaynaysa Trump?
Isniintii, kooxda u ololaynaysa madaxweynaha ayaa waxa ay warqad u direen Guddiga Doodaha Madaxtinimada, iyagoo ugu baaqay in wax laga badelo mowduucyada doodda ugu dambaysa ee la qaban doono Khamiistan.
Maareeyaha ololaha Trump, Bill Stepien, ayaa warqadda ku sheegay in dhinacyada ay goor horaba ku heshiiyeen in siyaasadda arrimaha dibadda diiradda lagu saaro doodda saddexaad.
Mowduucyada ayaa todobaadkii tegay waxaa ku dhawaaqday weriyaha warbaahinta NBC News Kristen Welker taas oo doodda daadihin doonta: Qoysaska Mareykanka, arrinta midabka dadka ee Mareykanka, isbadelka cimillada, ammaanka qaranka iyo hoggaanka.
Inta uu socday isu soo bax uu Mr Trump fiidkii Isniinta ku qabtay Prescott, Arizona, ayuu Ms Welker ku tilmaamay "Dimuqraadiyad xagjir ah" waxa uuna sheegay in aanay "wanaagsanaan doonin".
Mr Stepien ayaa waxa uu Mr Biden ku eedeeyay inuu "aad u doonayo inuu ka weecdo in laga wadahadlo rikoorkiisa siyaasadda arrimaha dibadda" guddigana uu iskudayayo inuu "Biden ka qariyo taariikhdiisa".
"Hab-dhaqanka guddigan u janjeera Biden ayaa doodda oo dhan ka dhigay mid fashil ah, layaabna malahan in dadweynuhu ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabeen," ayuu qoray.
Sidoo kale waxa uu Mr Trump ku eedeeyay inuu isku dayayo inuu ka weecdo su'aalaha ku saabsan wararka la xiriira email-lada la sheegay in wiilkiisa Hunter uu ku lug leeyahay, iyo eedda ah inay jiraan dano isdiidan.
Siday kooxda u ololaynaysa Biden ay arrintaas uga jawaabeen?
Dhinaca kooxda u ololaynaysa xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhankooda sheegay in dhab ahaantii Mr Trump uu yahay qofka isku dayaya inuu ka weecdo su'aalaha.
"Kooxaha ololada qaabilsan iyo guddigaba waxa ay bilo ka hor ku heshiiyeen in qofka doodda wadi doona uu mowduucyada soo xuli doono," ayuu yiri TJ Ducklo oo dhanka warbaahinta u qaabilsan Xisbiga Dimuqraadiga.
"Kooxda ololaha u qaabilsan Trump arrintaas been ayey haatan ka sheegeen sababtoo ah Donald Trump waxa uu ka cabsanayaa inuu wajaho su'aalo badan oo ku saabsan habka musiibada ah ee uu uga falceliyay Covid-19.
"Caadiyanna, madaxweynaha waxa uu aad uga walwalayaa shuruucda doodda halkii uu dalka ka caawin lahaa dhibaatada uu wajahayo."
Maxay yihiin shuruucda doodda?
Kaddib markii ay dadweynuhu dhaleeceeyeen sida loo maamulay dooddii koobaad, ayaa guddiga waxa uu qaatay sharci cusub oo ah in microphone-ka la xiro doodda ugu dambaysa.
90-ka daqiiqadood ee doodda ayaa waxaa loo kala qeybinayaa min 15-daqiiqadood. Bilowga mowduuckasta, labada musharaxba waxaa la siin doonaa laba daqiiqadood oo aanan laga soo dhexgalayn - markaas oo la damin doono microphone-ka qofka aan hadlayn.
Wixii markaas ka dambeeya dood furan ayaa bilaabanaysa - mudadaasna microphone-ka lama xiri doono.
Bayaan go'aankaas lagu shaacinayo ayey guddiga doodda waxa ay ku sheegeen inay ka go'an tahay inay qaaddo "tallaabooyin habboon oo looga gol-leeyahay in lagu tixgaliyo shuruucda lagu heshiiyay".
Guddiga ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in "hal [olole] uu u maleeyo in lagu talaxtagay arrinta, halka laga yaabo in midka kale uu u maleeyo inaanan meel fog wax la gaarsiin", hasayeeshee tallaabooyinkaas ayaa waxaa lagu sameeyay hab sax ah oo isu dheeli tiran oo ay ku jirto danta dadka.